ch 19 ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 19 ယောဟန်သည်
19:1 ထို့ကြောင့်, ပိလတ်မင်းသည်ထို့နောက်ချုပ်နှောင်ထားသို့သညျယရှေုကို ယူ. သူ့ကိုရိုက်.
19:2 ထိုအခါစစ်သား, ဆူးပင်တစ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကို plaiting, သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ချမှတ်ထား. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးမောင်းသောအထည်သည်အဝတ်ကိုတင်.
19:3 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုချဉ်းကပ်ဟုခဲ့သည်, "မင်ျဂ, ယုဒရှင်ဘုရင်!"ထိုသူတို့ကအကြိမ်ကြိမ်သူ့ကိုလုပ်ကြံ.
19:4 ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်နောက်တဖန်အပွငျသို့ထှကျ, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "အကယ်, သင်တို့အားငါသူ့ကိုထွက်ဆောင်ခဲ့ပါ၏, သငျသညျကြှနျုပျသညျသူ့ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိအမှုရှာတွေ့သဘောပေါက်စေခြင်းငှါဒါကြောင့်။ "
19:5 (ထိုအခါယေရှုသည်ထွက်သွားလေ၏, ဆူးပင်ဦးရစ်သရဖူနှင့်နီမောင်းသောအဝတျကိုသည်းခံခြင်း။) ထိုသူတို့အားဆို၏, "လူကိုကြည့်ရှုကြလော့။ "
19:6 ထို့ကြောင့်, အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်အမှုထမ်းသူ့ကိုမြင်သောအခါ, သူတို့အော်ဟစ်, ဟုဆို: "သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ! သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ!"ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို: "သူ့ကိုကိုယ်အဘို့ကိုယ်ကို ယူ. သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားခြင်း. ငါသူ့ကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိအမှုရှာတွေ့သည်။ "
19:7 ယုဒလူတို့ကသူ့ကိုပြန်ပြော, "ကျနော်တို့ကဥပဒေရှိ, နှင့်တရားအတိုင်း, သူသေဆုံးရမည်, သူသညျမိမိကိုဘုရားသခငျ၏သားတျောကိုဖန်ဆင်းပြီ။ "
19:8 ထို့ကြောင့်, ပိလတ်မင်းသည်ဤစကားတော်ကိုကြားလျှင်, သူကပိုပြီးကြောက်ခဲ့.
19:9 ထိုမင်းသည်နောက်တဖန်အိမျတျောဦးသို့ဝငျ. ထိုမင်းသည်ယေရှုအားကပြောပါတယ်. "သင်ဘယ်ကလဲ?"ဒါပေမယ့်ယရှေုသညျအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ပေး၏.
19:10 ထို့ကြောင့်, ပိလတ်မင်းသည်ကလညျး: "သင်ငါ့ကိုစကားမပွောလိမျ့မညျ? သင်တို့သည်ငါလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းအခွင့်အာဏာရှိသည်မသိကြ, သင်တို့ကိုငါလွှတ်ခွင့်အာဏာရှိ?"
19:11 ယရှေုသညျတုန့်ပြန်, "သင်ငါ့ကိုကျော်မဆိုအခွင့်အာဏာရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့, ဒါကြောင့်အထက်ထံမှသင်တို့အားပေးခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်. ဒီအတွက်ကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးသူသည် သာ. ကြီးမြတ်အပြစ်တရားရှိပါတယ်။ "
19:12 ပြီးတော့အထဲကပေါ်, ပိလတ်မင်းသည်သူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်ရှာကြံခဲ့. သို့သော်ယုဒလူတို့အော်ဟစ်ခဲ့ကြ, ဟုဆို: "သင်ဤလူကိုလွှတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျကဲသာဘုရငျ၏အဘယ်သူမျှမမိတျဆှေများမှာ. မိမိကိုမိမိတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်ကိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်ကဲသာဘုရငျဆနျ့ကငျြ။ "
19:13 အခုတော့ပိလတ်မင်းသည်ဤစကားကိုကြားလျှင်, သူအပြင်ဘက်သညျယရှေုကိုဆောင်ခဲ့, သူကတရားသဖြင့်စီရင်၏ထိုင်ခုံများတွင်ထိုင်ကြ၏, အခင်းဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်၌ရှိ, ဒါပေမဲ့ဟေဗြဲအတွက်, ထိုသို့မြင့်တက်ခြင်းဟုခေါ်သည်.
19:14 အခုတော့ပသခါပှဲ၏ပြင်ဆင်မှုနေ့, ဆဌမနာရီ ပတ်သက်.. ထိုမင်းသည်ယုဒလူတို့အားမိန့်, "သင်တို့၏ရှငျဘုရငျကိုကြည့်ရှုကြလော့။ "
19:15 ဒါပေမဲ့သူတို့ကအော်ဟစ်ခဲ့ကြ: "သူ့ကိုပယ်ရှားလျှင်! သူ့ကိုယူသှား! သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ!"ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, "ငါသည်သင်တို့၏ရှင်ဘုရင်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားခြင်းပါမညျ?"ဒီယဇ်ပုရောဟိတ်တုန့်ပြန်, "ကျနော်တို့ကကဲသာဘုရငျမှတပါးအဘယ်ရှင်ဘုရင်မရှိ။ "
19:16 ထို့ကြောင့်, သူထို့နောက်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားစေခြင်းငှါသူတို့အလိုငှါလွှဲပြောင်းပေးအပ်. ထိုသူတို့သညျယရှေုကို ယူ. ကွာသူ့ကိုဦးဆောင်.
19:17 မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတင်ဆောင်လာသော, သူကရာနီဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်မှထွက် သွား., ဒါပေမဲ့ဟေဗြဲအတွက်ကြောင့်ဦးခေါင်းခွံ၏ရာဌာနဟုခေါ်သည်.
19:18 အဲဒီမှာသူတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား, သူ့ကိုနှစ်ဦးတခြားသူတွေနဲ့, အသီးအသီးဘက်မှာတယောက်, အလယ်၌ယေရှုနှင့်အတူ.
19:19 ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်လည်းတစ်ဦးခေါင်းစဉ် wrote, သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်အထက်တွင်တင်ထား. ထိုသို့ရေးသားခဲ့: ယေရှုနာဇရက်မြို့သား, ယုဒရှင်ဘုရင်.
19:20 ထို့ကြောင့်, ယုဒလူတို့အများအပြားကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်, ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောရာအရပ်မြို့အနီးစပ်ခဲ့မှုအတွက်. ထိုသို့ဟေဗြဲ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်, ဂရိ, နှငျ့လကျတငျအတွက်.
19:21 ထိုအခါယုဒလူတို့၏အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ပုရောဟိတ်ပိလတ်မင်းအားဆို၏: မရေးပါ, ယုဒလူတို့၏ '' ဘုရင်,,'' ဒါပေမယ့်သူကပြောသည်ကြောင်း, '' ငါသည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏။ ''
19:22 ပိလတ်မင်းသည်တုန့်ပြန်, "ငါသည်ရေးထားပြီအဘယျသို့, ငါရေးထားပြီ။ "
19:23 ထိုအခါစစ်သား, သူတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပြီးမှ, မိမိအဝတ်ကို ယူ. ,, သူတို့ကလေးစိတျအပိုငျးလုပ်, တစျစိတျအပိုငျးတစျခုစီစစ်သားမှ, နှင့်အင်ျကြီ. သို့သော်အင်ျကြီချောမွေ့စွာခဲ့သည်, မြေတပြင်လုံးတစ်လျှောက်လုံးအထက်မှယက်.
19:24 ထိုအခါသူတို့အချင်းချင်းကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်စို့, ဒါပေမဲ့အစားကိုကျော်စာရေးတံချကြကုန်အံ့, အဘယ်သူ၏ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ "ကျမ်းစာပြည့်စုံမည်မယ်လို့ဒီတော့ဒီခဲ့ကြည့်ဖို့, ဟုဆို: "သူတို့ကအချင်းချင်းကိုငါ့အဝတ်ကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြ, နှင့်ငါ့အဝတ်အဘို့ထိုသူတို့ဧကန်အမှန်။ စာရေးတံချ "ထိုအပြီ, စစ်သားတွေဤအရာကိုပြု.
19:25 ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အနားမှာရပ်နေသူ၏မိခင်ခဲ့ကြ, နှင့်သူ၏မိခင်ရဲ့ညီမ, နှင့် Cleophas မာရိ, နဲ့ Mary ဂဒလမာ.
19:26 ထို့ကြောင့်, ယရှေုကမိမိမိခင်နှင့်နီးတော်မူရပ်နေချစ်တော်မူသောတပည့်မြင်ကြပြီးမှ, သူသည်မိမိအမိအားကဆိုသည်, "အချင်းမိန်းမ, သင်၏သားကိုကြည့်ရှုလော့။ "
19:27 နောက်တစ်ခု, သူသည်တပည့်ဖို့ကဆိုသည်, "။ သင်၏အမိကိုကြည့်လော့" ထိုအခြိနျ မှစ., တပည့်တိုင်းမိမိအဖြစ်သူမ၏လက်ခံခဲ့သည်.
19:28 ထိုနောက်မှ, ယရှေုသညျအားလုံးပြည့်စုံခဲ့ကြောင်းသိ, ထို့ကြောင့်ကျမ်းစာ၌ပြီးစီးစေခြင်းငှါအမိန့်ရှိကြောင်း, ဟုသူကပြောသည်, "ငါသည်ရေငတ်။ "
19:29 ထိုအရပ်၌ထားတဲ့ကွန်တိန်နာရှိ၏, ရှလကာရည်နှင့်ပြည့်ဝ၏. ထိုအခါ, ဟုဿုပ်ပင်ပတ်လည်မှာရှာလကာရည်အပြည့်အဝရေမှိုတထွေးအားမရ, သူတို့သူ၏နှုတ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏.
19:30 ထိုအခါယေရှုသည်, သူကရှာလကာရည်ကိုလက်ခံရရှိပြီးမှ, ကပြောပါတယ်: "ဒါဟာ။ ကုန်" ဟုသူ၏ဦးခေါင်းကိုချဦးညှ, သူသည်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်အားလက်နက်ချ.
19:31 ထိုအခါယုဒလူတို့, ထိုသို့ပြင်ဆင်မှုနေ့ကဖွစျသောကွောငျ့, အလောင်းတွေဥပုသ်နေ့၌လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ်သို့မတည်မနေမယ်လို့နိုင်အောင် (ကဥပုသျနေ့အဘို့ကြီးစွာသောနေ့၌ခဲ့သည်), သူတို့ခြေထောက်တွေကျိုးပဲ့ပျက်စီးစေခြင်းငှါအမိန့်ရှိပိလတ်မင်းသည်အသနားခံ, ထိုသူတို့သိမ်းသွားစေခြင်းငှါ.
19:32 ထို့ကြောင့်, စစ်သားတွေချဉ်းကပ်, နှင့်, တကယ်ပါပဲ, သူတို့ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး၏ခြေထောက်ဖဲ့, သူနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခဲ့သူကိုအခြား၏.
19:33 ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေုကိုချဉ်းကပ်ပြီးမှ, သူတို့ကသူပြီးသားသေကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်, သူတို့ကသူ့ခြေထောက်တွေကိုချိုးဖျက်ဘဲ.
19:34 အဲဒီအစား, စစ်သူရဲတယောက်တစ်လှံနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဖွင့်လှစ်, ချက်ချင်းသွေးနှင့်ရေရှိထွက်သွားကြ၏.
19:35 နှင့်ဤသည်ကိုမြင်တော်မူသောသူသက်သေခံချက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, နှင့်သူ၏သက်သေခံချက်မှန်သည်. သူကအမှန်တရားကိုပွောသောသိတ, သင်သည်လည်းယုံကြည်စေခြင်းငှါဒါ.
19:36 ကျမ်းစာ၌မပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုဒါကြောင့်ဤအရာတို့ကိုအဘို့အဖြစ်ပျက်: "သင်သူ့ကိုတစ်အရိုးကိုမချိုးရကြလိမ့်မည်။ "
19:37 တဖန်တုံ, အခြားကျမ်းစာ၌ကပြောပါတယ်: "သူတို့ကသူ့ကိုကြည့်ရှုရကြလိမ့်မည်, အဘယ်သူကိုသူတို့ထိုးဖောကျပြီ။ "
19:38 ထိုအခါ, ဤအရာတို့ကိုအပြီး, ရိမသဲမြို့သားယောသပ်သည်မှ, (သူသညျယရှေု၏တပည့်ခဲ့သောကြောင့်,, ဒါပေမဲ့ယုဒလူတို့၏ကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတယောက်) သူသညျယရှေု၏ကိုယ်ကိုပယ်ရှင်းစေခြင်းငှါဒါပိလတ်မင်းသည်အသနားခံ. ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ခွင့်ပြုချက် ပေး.. ထို့ကြောင့်, သွားလေရာနှငျ့ယရှေု၏ကိုယ်ကိုပယ်ရှင်းပြီ.
19:39 အခုနိကောဒင်သည်လည်းရောက်ရှိ, (ညဉ့်အခါပထမဦးဆုံးမှာယေရှုအားသွားပြီခဲ့သူ) မုရန်နှင့်အကျော်အရောအနှောဆောင်ခဲ့, အကြောင်းခုနစ်ဆယ်ပေါင်အလေးချိန်.
19:40 ထို့ကြောင့်, သူတို့သညျယရှေု၏ကိုယ်ယူ, သူတို့ကပိတ်ပုဆိုးနှင့်မွှေးကြိုင်သောနံ့သာမျိုးနှင့်အတူကခညျြနှောငျ, ထိုသို့သင်္ဂြိုဟ်ရန်ယုဒလူတို့၏ထုံးစံသည်နည်းတူ.
19:41 ယခုသူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားခဲ့ပါတယ်ရာအရပ်တွင်ဥယျာဉ်ရှိ၏, နှင့်ဥယျာဉ်တော်၌တစ်သင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ရှိ၏, အဘယ်သူမျှမချသေးသော်လည်းခဲ့သည့်အတွက်.
19:42 ထို့ကြောင့်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယုဒအမျိုး၏ပြင်ဆင်မှုနေ့၏, သင်္ချိုင်းအနီးနားခဲ့စဉ်ကတည်းက, ထိုအရပ်၌သညျယရှေုထားရှိ.